यी उपाय अपनाउनुस्, घण्टौँ टिक्नेछ स्मार्टफोनको ब्याट्री - Naya Pusta
यी उपाय अपनाउनुस्, घण्टौँ टिक्नेछ स्मार्टफोनको ब्याट्री
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ फाल्गुन १८ १५:१४ 3
यतिधेरै फिचरहरुका बाबजुत यी स्मार्टफोनको एउटा मात्रै कमजोरी चाहीँ के भने यी अत्याधुनिक ग्याजेटको ब्याट्री छोटो समयमै सकिन्छ । स्मार्टफोनको ब्याट्रीको चार्ज स्वात्तै सकिने समस्या धेरैले भोगेकै समस्या हो। तर यदि यी उपाय अपनाउनुभयो भने तपाइँको स्मार्टफोनको ब्याट्रीको चार्ज लामो समयसम्म टिक्नेछ:
· रिंगटोन लगाउनु भन्दा मोबाइल फोन भाइब्रेसनमा राख्दा ब्याट्रीको खपत धेरै हुन्छ । त्यसैले टोन बज्दा असर गर्नेवाला छैन भने स्मार्टफोन भाइब्रेसन मोडमा नराख्नुस् ।
· फोनको स्क्रिनमा विभिन्न खाले लाइभ वालपेपर देख्नमा त सुन्दर लाग्छ तर यसले ब्याट्रीको चार्ज पनि रित्याउँछ । त्यसैले यस्तो लाइभ वालपेपरको साटो कालो रंगको वालपेपर लगाउनुहोस् जसले ब्याट्री कम खान्छ ।
· तपाइँको फोनमा इन्स्टल गरिएका धेरैजसो एपहरुले लोकेसन ट्रयाक गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा आवश्यकता विना पनि तपाइँले यसलाई लगातार अनमै राख्नुभएको हुन्छ जसले धेरै ब्याट्री खाइरहेको हुन्छ । त्यसैले आवश्यक नभएको बेला त्यस्तो फिचर तथा एपहरु बन्द गर्नुहोस् ।
· कहिलेकाहीँ स्मार्टफोनको ब्याट्री सकिने आँटेको तर तत्काल चार्ज गर्ने ठाउँ नभएको अवस्था आउँछ । यस्तोमा स्मार्टफोनलाई एयरप्लेन मोडमा हाल्नुहोस् ।
· एप अपडेट गर्नु तपाइँका लागि बोझिलो काम हुनसक्छ तर यसले तपाइँको स्मार्टफोनको ब्याट्री लाइफ चाहीँ बढाउँदछ । डेभलपर्सले ब्याट्री तथा मेमोरी अप्टिमाइजेसनलाई सुधार गर्नका लागि अपडेसन गर्दछन् । त्यसैले आफ्नो स्मार्टफोनमा कुनैप्नि एपको लेटेस्ट भर्सन इन्स्टल भएको छ र अपडेट भएको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनहोस् ।
· फोनको होमस्क्रिनमा एप्सका आइकनहरुको भिड नलगाउनुहोस् । विरलै प्रयोग गर्ने एपहरुलाई होमस्क्रिनमा नराख्नुहोस्, मेन्यू भित्र हाल्नुहोस् ।
· स्क्रिनले सबैभन्दा धेरै ब्याट्री रित्याउँछ । स्क्रिन जति ठूलो हुन्छ, जति धेरै रिजोलुसन तथा चमकदार हुन्छ उसले उति नै धेरै उर्जा खपत गर्दछ । यदि तपाइँको फोनमा स्क्रिन ब्राइटनेसका लागि अटो मोड छ भने त्यसको प्रयोग गर्नुहोस् । यदि छैन भने ब्राइटनेसलाई ५० प्रतिशतमा राख्नुहोस् । यसले ब्याट्रीको खपत कम गर्दछ। एजेन्सी
नेपाली महिला क्रिकेटरको गुनासो, सरकारले हामीलाई हेप्यो
निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यी उपाय अपनाउनुस् !
ल्याप्टप वा कम्प्युटरबाट महत्वपूर्ण डाटा डिलिट भयो ? यसरी गर्नुहोस् रिकभर
स्मार्टफोनमा हुन्छ ट्वाइलेटमा भन्दा १८ गुणा धेरै ब्याक्टेरिया, यसरी गर्नुहोस् सफा